Musharixiintu ma sasabidda Rooble ayay sax moodaan? | KEYDMEDIA ONLINE
Musharixiintu ma sasabidda Rooble ayay sax moodaan?
Sida ay rumeysan yihiin dadka u dhuun-duleela arrimaha doorashooyinka, Rooble, wuxuu soo dhaweyn doonaa natiijo kasta oo ka soo baxada doorashooyinka Aqalka hoos, si la mid ah sidii uu u soo dhaweeyay doorashooyinkii boobka ahaa ee Aqalka sare.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Musharixiintaa Soomaaliya, ayaa u muuqda in talo siyaasadeed ay farahooda ka baxday, waxayna sida la saadaalinayo ay ku qasbanaan doonaan in ay taageeraaan habraacayada doorshada Golaha Shacabka, ee ay dhawaan saxiixeen, Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, Madaxda Maamul goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Musharixiintu hore ayay u caddeeyeen mowqifkooda arrinkaas ku aaddan, oo si buuxda ayay u diideen go’aaanka ay gaareen Golaha Wadatashiga Qaran-ka, hayeeshee, waxa ay u muuqdaan kuwo aan hadalkooda dhag loo dhigin.
24 August 2021, waxaa lagu waaday in ay kulmaan guddi isku dhaf ah, oo Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada iyo Midowga Musharixiinta Soomaaliya, u saareen xallinta khilaafka ka dhashay habraaca doorashada Golaha shacabka, hayeeshee, kulankaas ayaa baaqay.
Qoorqoor, oo ka mid ahaa xubnaha ka socday dhanka Golaha Wada-tashiga Qaranka, ayaa ku andacooday in kulankaaas uusan ka qeyb gali karin maadaama, isla-maalintaas ay Kooxda Al-Shabaab, duullaan xooggan ku qaadeen degaanka Camaara oo ka tirsan Maamulka Galmudug.
Taariikh kale ayaa la ballamay, hayeeshee, Madaxda Maamullada qaarkood ayaa is-arag ka hor ka baxay Muqdisho, taas oo bannaanka keentay in Musharixiintu cashir aan cambaareyn ahayn dhigi karin.
Maanta, waxa ay kulan la qaateen, Ra’iisul Wasaaaraha Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, waxayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin; Dardar gelinta howlaha doorashooyinka Iyo in doorashadu noqoto mid hufan, daahfuran oo waqtigeeda ku dhacda.
“Midowga Murasharaxiinta ayaa Ra’iisul Wasaaraha la wadaagay talooyin ku aaddan turxaanbixinta iyo kala caddeynta qodobbada qaar ee ku xusan habraacii arrimaha doorashooyinka ee Golaha Wadatashiga Qaranku soo saareen 24-kii bishan”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Xukuumadda.
Sida ay rumeysan yihiin dadka u dhuun-duleela arrimaha doorashooyinka, Rooble, wuxuu soo dhaweyn doonaa natiijo kasta oo ka soo baxada doorashooyinka Aqalka hoos, si la mid ah sidii uu u soo dhaweeyay doorashooyinkii boobka ahaa ee Aqalka sare, mana la filayo doorasho xalaal ah, oo Rooble Sasabid cidlo ah ayuu wadaa.
Maanta qodobada ay Ra’iisul Wasaaraha iyo Midowga Musharraxiinta, ka wada hadleen waxaa ka mid aahaa in si wadajir ah looga wada shaqeeyo bilaabista wajiga labaad ee doorashada Golaha Shacabka ee BFS, taas oo la micno ah in laga gudbay cabashadii masharixiinta.